RAW Kuongorora: Kurota mutambo muchiitiko chikuru, RETRIBUTION kuita chiziviso chinotyisa? (10 Nyamavhuvhu, 2020) - Wwe
RAW Kuongorora: Kurota mutambo muchiitiko chikuru, RETRIBUTION kuita chiziviso chinotyisa? (10 Nyamavhuvhu, 2020)
Tikugashirei kudhisheni revhiki rino reRAW Preview! Isu tave kubata masvondo maviri chete takananga kuChirimoSlam uye ino ichave yekupedzisira RAW kumabiko makuru ezhizha.
Svondo rapfuura RAW yaive chiitiko chinonakidza, nekudzoka kwaShane McMahon zvichikonzera kuiswa kweRAW Underground. Kuwedzera kuzvinhu, kuuya kweRETRIBUTION kunoita kunge kuri kuzunza zvinhu uye isu tichaenda kune izvo chaizvo munguva pfupi.
misoro yekutaura nezvayo neshamwari yepamwoyo
Kunyangwe akarasikirwa nemutambi wake weUnited States kune anodzoka Apollo Crews paRAW, MVP neThe Hurt Bhizinesi vakaramba vakamira vakareba pakupera kweshoo. Ngatisvetukirei mune izvo zvatinotarisira pane RAW!
# 5. Kevin Owens anotora Randy Orton mumutambo wekurota paRAW
Kevin Owens naRandy Orton
Randy Orton ari kupokana naDrew McIntyre wezita reWWE uye mukwikwidzi wenguva gumi nematatu wepasirose anga ari imwe yenzvimbo dzakatarisana neRAW munguva yedenda. Kevin Owens anga asiri mugakava munguva pfupi yapfuura, asi izvo hazvina kumumisa kubva pakupinda mumamiriro akasiyana siyana achipokana neSuperstars dzakasiyana.
Kevin Owens, John Cena, naRic Flair vachiseka kumashure #WWERAW pic.twitter.com/30rbxl4thx
- Rob Wilkins (@robwilkins) Nyamavhuvhu 4, 2020
Kevin Owens akaita hurukuro inonakidza naRic Flair paRAW ndokumuudza kuti ataure Randy Orton kuti amupikise kumutambo. Chokwadi zvakakwana, yakaverengerwa kwevhiki gare gare uye manheru ano, Iyo Viper / Legend Killer achatarisana naKevin Owens paRAW mumutambo wekurota, pamwe muchiitiko chikuru (nekuti ndiyo chete slot yacho).
. @RicFlairNatrBoy handina kumboona IYI matchup ichiuya!
Chii chingaitika kana @FightOwensFight hondo @RandyOrton mangwana manheru #WWERaw ? pic.twitter.com/zCNONe1hc0
chii chaunofanira kuita kana ur bored
- WWE (@WWE) Nyamavhuvhu 10, 2020
Hatina chokwadi chekuti Drew McIntyre achaitei pachiitiko ichi kana kana akatombobatanidzwa neimwe nzira, asi haaratidzike senge rudzi rweSuperstar aizoita.
Tinotarisira kuti Randy Orton achatora kukunda, nekuda kwekuti anga ari pane rimwe danho rose mumwedzi mishoma yapfuura. Nekudaro, isu tinotarisira kuti uchave mutambo wakanaka nekupera kwakanaka.
kuita mweya wakasununguka
sei kuwana murume kukuremekedza
roman anotonga dean ambrose uye seth rollins
sei kusava nehanya nezvinofungwa nevanhu uye uve wega
zvekuita neshamwari dzenhema
nderipi izwi rakasimba kudarika rudo